Idlalwa njani iMfazwe
Ngu-Barry Rigal, u-Omar Sharif
Imfazwe ngumdlalo omkhulu wamakhadi wabantwana abancinci. Injongo kukufumana onke amakhadi, onokuwenza ngeendlela ezahlukeneyo. Ukudlala iMfazwe, kufuneka oku kulandelayo:
I-tylenol 3 kunye ne-tramadol
Umgangatho osemgangathweni wamakhadi angama-52
Qala ngokubonelela ngekhadi elinye ngexesha, ujonge phantsi, ukuze umdlali ngamnye afumane amakhadi angama-26. Gcina amakhadi akho kwimfumba kwaye ungazijongi. Umdlali ngamnye ujika ikhadi elinye ngaxeshanye; Nabani na ojika elona khadi liphezulu athatha la makhadi mabini aze awabeke phantsi ezantsi kwemfumba yakhe.
Amakhadi anomgangatho oqhelekileyo ukusuka phezulu ukuya kwezantsi: i-ace, inkosi, ukumkanikazi, uJack, kunye no-10 ukuya ku-2.
Umdlalo uyaqhubeka ngale ndlela de babe bobabini abadlali batyhile ikhadi elikwinqanaba elifanayo, ngelo xesha ungene kulo Imfazwe. Imfazwe inokuqhubela phambili ngeendlela ezintathu.
Umdlali ngamnye ubeka ikhadi elijongise ezantsi ngaphezulu kwekhadi elibotshiweyo emva koko ajonge phezulu. Nabani na onekhadi lokujongana eliphezulu uthatha onke amakhadi amathandathu.
Umdlali ngamnye ubeka amakhadi amathathu ajonge phantsi etafileni kunye nekhadi elinye lokujongana, ke olu khuphiswano lelamakhadi alishumi. Olu khetho luwukhawulezisa umdlalo, odla ngokutsala kancinci - ngakumbi abantwana!
Umdlali ngamnye ubeka phantsi amakhadi kuxhomekeke kwinqanaba lamakhadi abotshiweyo. Ukuba amakhadi alinganayo angama-7s, ngamnye makabala amakhadi asixhenxe ajonge phantsi ngaphambi kokuguqula ikhadi. Ukuba amakhadi alinganayo ngookumkani, ookumkanikazi, okanye iijack, uyawala amakhadi ali-10 ngaphambi kokutsiba elinye kwaye ucime. Nge-ace, bala amakhadi ali-11 ajonge phantsi.
Ukuba kuvela enye iqhina, phinda inkqubo de umntu afumane uloyiso.
Ukuba umdlali uphelelwa ngamakhadi embindini wemfazwe, unezisombululo ezibini ezinokwenzeka: Ulahlekelwa yimfazwe kwaye uphume kumdlalo, okanye ujika ikhadi lakho lokugqibela ujonge phezulu, kwaye ezi zibalwa njengekhadi lakho elidlalwe emfazweni .
Nabani na ophumelela amakhadi uyawaqokelela awabeke emazantsi emfumba yakhe. Umntu wokuqala ukufumana onke amanye amakhadi omdlali ophumeleleyo.
Ungadlala iMfazwe nabadlali abathathu. Umthengisi unika amakhadi ali-17 kumdlali ngamnye, ejonge phantsi. Ikhadi eliseleyo liza kuphumelela kwimfazwe yokuqala. Abadlali ngaxeshanye batshintsha ikhadi elinye. Elona khadi liphezulu kula mathathu lithatha onke la makhadi mathathu. Ukuba abadlali ababini babopha ikhadi eliphezulu, babeke amakhadi amathathu bajonge phantsi kwaye emva koko babeke ubuso ngobuso, kwaye elona khadi liphezulu liqokelela onke amakhadi akwimfumba. Ukuba unomnye umzobo ngeli xesha, ulwa enye imfazwe. Ukuba bobathathu abadlali bajika ikhadi elinye, kuya kubakho iimfazwe ezibini; Umdlali ngamnye ujika amakhadi amathandathu ajikeleze elinye, kwaye ophumeleleyo uwathatha onke.
nini uJefferson waba ngumongameli
yintoni i-tricyclic antidepressants
ubhala kanjani ingoma yelizwe
isetyenziselwa ntoni i-sulphate yentsimbi
yintoni injongo yokubhaptizwa